Sina YF-T3 feno latabatra fanaovana akanjo fisainana maoderina mpanamboatra sy mpamatsy | Yifan
YF-T3 feno latabatra fisoloana akanjo maoderina
Fiainana tsotra Manamboatra endrika tsotra sy tsara ary ahazoana aina izahay. Mora mivory izy ireo. Ny practicality andartistry dia mifameno, manambatra ny kilasika amin'ny lamaody.
KEVITRA MDF avo lenta, vy mihosotra volamena
DIMENSION TABLE 900mmL x 400mmW x 750mmH
Manambatra ny fahatsorana sy ny fomba, ity latabatra fiakanjo YIFAN minimalist ity dia fanampin-javatra malaza amin'ny faritra anaovanao. Ny tampon'ny flip dia mampiseho fitaratra sy toerana lehibe indrindra.
Ny latabatra fiakanjo dia napetraka tamin'ny tabilao MDF tontolo iainana E1 ary hazo fingotra nafarana. Milamina sy fotsy ny velaran-loko. Omena seza fanaovana makiazy.
Mety hihoatra ny latabatra zava-poana amin'ny makiazy sy ny birao fanoratana izy io, mety tsara amin'ny toerana kely. Ampidiro ny seza tsy misy dikany sy ny fitaratra ambony.
Ny eo an-tampony dia misy vatasarihana 2 sy fitaratra tsy misy fotony ambony tampoka. Ny toerana fitehirizana lehibe kokoa sy malefaka kokoa mba hitehirizana mora amin'ny kosmetika, firavaka, ranomanitra sy fitaovana fanatsarana tarehy.2 Ny vatasarihana sy ny efitrefitra anatiny dia mitahiry fitehirizana firavaka, makiazy ary kojakoja ary manafaka ny latabatra.
Ny fitaratra dia manana zoro fiakarana lehibe kokoa, manamora ny fampisehoana ny lohan'ny makiazy rehetra amin'ny fitantanana volo mora. (valiny aorian'ny famotorana) .Ny ao anatin'ny fitaratry ny fitaratra dia misy sela azo esorina amin'ny fitehirizana tavoahangy kosmetika nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fifandimbiasan'ny fitafiana sy ny birao. ny ampolony dia ampiasaina ho fitaratra. Manana habaka fitehirizana lehibe. Rehefa manokatra ny flip ianao dia hiseho eo imasonao ny habaka vaovao. Voasarona fitaratra ny fonony.
Ny vovoka vita amin'ny vy vita amin'ny vovoka volamena dia misy fanoherana mafy ny harafesina, bara fananganana marindrano iray ary bara roa mitsivalana eo amin'ny farany ambany dia afaka manamafy ny filaminana
Ny latabatra fiakanjoana dia azo apetraka ao amin'ny efitrano fandriana, efitrano fisoloana akanjo, lalantsara sns mora apetraka.
FAMPIANARANA TABLE ： 800mmL x 400mmW x 750mmH
STYLE: Volavola mihaja sy maoderina sy maoderina
Previous: Vanity napetraka amin'ny Touch Screen Mirror
Manaraka: Latabatra makiazy YF-T5 maoderina sy fipetrahana eo am-pandriana
Latabatra fiakanjo fahagola
Mpandamina latabatra miakanjo
Latabatra fiakanjo miaraka amin'ny tongotra vy tsy misy fangarony
Latabatra fiakanjoana Piaono Paint
Latabatra fiakanjo fotsy
YF-T12 Drop-down tray dia misokatra amin'ny fitafiana fitehirizana
Latabatra fisoloana akanjo sy maoderina YF-T6
Latabatra makiazy tongotra tongotra
hazo fitaratra Flip-Up fitaratra sy firavaka fitehirizana
Latabatra makiazy YF-T5 maoderina maoderina ary miloko ...